Incwadi yothando ene-Emojis ▷➡️ eltecnoanalista
incwadi yothando ene-emojis
incwadi yothando ene-emojis. Uma ufuna ukudlulisa a imizwa kumlayezo usebenzisa i-smartphone noma ezingxoxweni ezingokoqobo ezinkundleni zokuxhumana, kungenzeka ukuthi usuyisebenzisile inhliziyo yakho, "isithupha phezulu" isandla, izintende, noma ubuso obuphuzi obujabulisayo. Ukusesha kwe-Google kwakamuva kuthole ukuthi igama elithayiphiwe kakhulu nge-SMS noma ingxoxo bekungelona igama, kodwa idizayini yenhliziyo ebomvu. Ngokusho kwenkampani, isithombe nokuhlukahluka kwaso kubonakala izikhathi eziyizigidigidi ngosuku emhlabeni jikelele. Ukudla, izilwane, ezokuthutha, abantu, imizwa. Zonke lezi zithombe ezimibalabala ezivela njengenketho kukhibhodi yakho zibizwa I-Emojis.
Incwadi yothando ene-Emojis ➡️
Ukuxhumana akukhona nje amagama akhulunywayo noma abhaliwe, ngoba sibuye sixhumane ngaphandle kokukhuluma, okungukuthi, ngaphandle kokusebenzisa ulimi. Impela, ngesimo sobuso bethu, ukuthinta kwethu, umzimba wethu kanye nephimbo. Ukuxhumana kwethu kuya ngokuya kudijithali. Sibhala ama-imeyili futhi sixoxe WhatsApp, Facebook, Instagram noma Snapchat. Esingakwazi ukukuveza empilweni yangempela ngamagama, noma ngokungakhulumi, kushintshaniswa ama-Emoji nemibhalo emifushane. Lokhu kwengeza imizwa embhalweni futhi kungagwema ukungaqondi kahle. Abantu abaningi bathi bangakwazi veza imizwa kangcono nge-Emojis kunamagama.
Ngokungeziwe ezenzweni zobuso ezihlukahlukene kanye nokuthinta komzimba, kukhona nama-Emoji amele izinto. Lokhu kuvame ukusiza omunye ukuba aqonde isimo kanye nomongo waso. Ukuziphendukela kwemvelo kwe incwadi yothando ene-emojis Lethe izinzuzo eziningi kumabhrendi kanye nezinkundla zokuxhumana. Enye yezinkulu izinzuzo zokusebenzisa Izithonjana kanye ne-Emoji ukufinyeza umlayezo, okungukuthi, ukwenza okuqukethwe yi-a umbhalo ukhuthele kakhulu futhi uqondile.
Singasho ukuthi cishe akunakwenzeka ukuthumela futhi ungayifaki i-Emoji, akunjalo? Uma ungomunye walabo abathandayo incwadi yothando ene-emojis, kodwa awazi ukuthi zisetshenziswa kanjani ngobuchule, sizokusiza! Ibonisa ukuthi lezi izethulo eziyingcaca zavela kanjani nokuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokuzisebenzisa ezincwadini zakho.
Incwadi yothando ene-Emojis Ziyini?
Okuningi ukunakekelwa! Ungaphambanisi incwadi yothando ene-emojis con Izithombe-mzwelo / Izithonjana. Nakuba ama-Emoji eyizinhlamvu ezizimele, izithonjana ziyizithombe-mzwelo noma izimpawu ezenziwe ngezinhlamvu zekhibhodi, ezifana nokuthi (-: noma <3.
Indaba ethi "Incwadi Yothando Enama-Emojis"
I-Los incwadi yothando ene-emojis Sebevele bayingxenye yesiko lethu futhi usuku nosuku kunzima ukukhumbula ukuthi bavela ngasiphi isikhathi futhi kuphi, akunjalo??
Kodwa indaba indala kakhulu kunalokho kubonakala futhi iqala ngo-1999, eJapane, njengoba umsuka wegama elithi "Emoji" usuvele ufunwa.
Konke kwaqala ngesikhathi inkampani yomakhalekhukhwini i-NTT DoCoMo isungula i-I-mode, uhlobo lwephakheji yolwazi lomakhalekhukhwini, okuhlanganisa i-e-mail, isimo sezulu, izindaba kanye nokufinyelela ku-inthanethi, eyayithuthuke kakhulu ngaleso sikhathi futhi ifuna ukuguqula indlela amaJapane axhumana.
U-Shigetaka Kurita, omunye wabasebenzi be-NTT DoCoMo ababambe iqhaza kuphrojekthi ye-I-mode, wabona ukuthi ukuxhumana kwakubanda futhi ngezinye izikhathi okulingana ngokukhawulela imisho ebhalwe ngocingo kuphela kumakhalekhukhwini, futhi waqala ukufuna indlela yokwenza imilayezo ibe ngumuntu.
Kodwa akekho kubo owavumayo futhi kungaleso sikhathi lapho u-Kurita, owayengeyena umklami, ehlanganisa iqembu elincane futhi, ngomkhawulo wamaphikseli angu-12 × 12, wakha i-Emojis yokuqala engu-176 enomlando.
Lapho umdali we-Emojis ekugcineni ethula imiklamo yasekuqaleni ezinkampanini ezinkulu zobuchwepheshe, wayelindele ukuthi zizoyithuthukisa ngesakhiwo sazo, kodwa lokho akwenzekanga: izimpawu zingene kwimodi mina ngokuqondile ngendlela ezaziklanywe ngayo ekuqaleni.
Lokhu kugcine sekukhiqize izinhlamvu eziningi ezahlukene kanye nesiyaluyalu: inani lama-Emojis lifinyelele ku-800! - okwaqala ukuxazululwa ngo-2005, lapho inkampani ngayinye yanquma ukubeka imephu ukuthi yiziphi izinhlamvu ezisetshenzisiwe futhi izame ukusungula izinga phakathi kwabo.
Ezinkulungwaneni ezimbili neshumi nambili, omunye wabaqhudelani be-NTT DoCoMo, ngosizo luka-Kurita, ekugcineni uhlele kabusha izinhlamvu zangempela.
Kulungile, kodwa i-“Love Letter Emojis” yaphuma kanjani e-Japan futhi yathatha iplanethi?
Ngo 2007, I-Apple ikhiphe i-iPhone yokuqala futhi, ngokucabangela ukuthandwa kwayo emakethe yaseJapane, kufakwe ama-Emoji, njengoba lezi kwakuyizigigaba zamasiko eziqinile ezweni.
Ukuze kugwenywe isiphithiphithi okwabe kungukuqala kwe-Emojis e-Japan, i-Unicode Consortium yathatha inkathazo yokwenza ikhodi yezinhlamvu ifane ukuze abasebenzisi bezinhlelo zokusebenza ezihlukene bakwazi ukusebenzisa i-Emojis ngaphandle kokungaboni ngaso linye.
Njengamanje, i incwadi yothando ene-emojis ziyingxenye yesiko, futhi zisetshenziswa kusukela ekuxhumaneni kwansuku zonke kuye ekuxoxeni izindaba, njengasendabeni yencwadi ethi Emoji Dick, eguqule indaba yakudala ka-Moby Dick kusetshenziswa ama-Emojis kuphela.
Incwadi Yothando ene-Emojis Kwezokumaketha
Ngokuthandwa okukhulu kwe incwadi yothando ene-emojis kanye nendlela ezifakwe ngayo kusiko lweplanethi, abathengisi abahle babone amathuba angenakubalwa lolu limi olungawaphatha ekuxhumaneni namakhasimende abo.
Lesi isinyathelo esibalulekile ngaphambi kokuzindla nganoma yikuphi ukuxhumana, njengoba sihlala futhi kuzo zonke izimo sikhuluma lapha kuwebhu.
Ngaphambi kokuthi ucabange ukuthi yini ozoyisho nokuthi ungayisho kanjani, yazi ukuthi umuntu wakho uyasebenzisana yini ukusetshenziswa kwe-Emojis. Ingabe kuwukuthi izethameli zakho zikumaphesenti angu-8 kanye namanje ezingakaqashi futhi ezingakazifani nabalingiswa?
Elinye lamaphutha amakhulu lapho sebenzisa i-Emoji kwezokuthengisa ukuzisebenzisa ngaphandle kokwazi incazelo. Akuwona wonke angamela lokho okucabangayo, ngakho-ke kubalulekile ukwazi kahle ukuthi ukhuluma ngani.
Ithiphu elihle ukusebenzisa i-Emojipedia ukuthola incazelo ye-Emojis ngayinye, ngaphandle kokuphenya izinhlamvu ezikhethiwe ezinkundleni zokuxhumana ukubona ukuthi abantu bazisebenzisa kanjani nokuthi bakusiphi isimo.
Kungenzeka ukuthi uye wakwazisa, kodwa incwadi yothando ene-emojis zivuselelwa njalo.
Umuntu okhuluma ngqo nomkhiqizo wakho angavela futhi abe indlela ebalulekile yokuxhumana nezithameli zakho.
Ngakho-ke, kuyindlela enhle yokusebenzisa incwadi yothando ene-emojis en hlanganyela ngesikhathi sangempela futhi uhlanganyele nezithameli zakho, ikakhulukazi uma lokho kuxhumana kuyinto evamile futhi kujabulisa, njengalapho othile encoma inkampani yakho noma okuqukethwe kubhulogi yakho noma inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
5. Gwema imilayezo ebethelwe noma uyichaze kahle kakhulu
I-Emoji esetshenziswe esimweni esibucayi ngempela, njengalapho uphendula isikhalazo esivela kukhasimende lakho lesevisi ku-Twitter noma esitatimendeni esibucayi kakhulu, ingadutshulwa onyaweni.
Qiniseka ukuthi i-Emoji ngeke idide noma icasule noma ubani ofunda umlayezo wakho, futhi uyisebenzise ngokonga, ikakhulukazi uma kuziwa enkonzweni yamakhasimende.
7. Sebenzisa Incwadi Yothando ene-Emojis ehambisana nomlayezo wakho
Ungalokothi usebenzise incwadi yothando ene-emojis ukusebenzisa nje. Qiniseka ukuthi umsebenzi uzokwengeza okuthile kumlayezo wakho noma uhlobane nalokho ofuna ukukusho.
Lobu buso obujabulile obubonisa amazinyo abo yi-Emoji ekahle yokuchaza injabulo noma injabulo yomlayezo owamukelwe. Lesi sithonjana esidume kakhulu besilokhu sinathi kusukela ekuqaleni kwezinhlelo zokusebenza zemiyalezo esheshayo nezinkundla.
I-Emoji Ehlekayo Ekhalayo isetshenziselwa ukuzwakalisa ukuthi uhleke kakhulu kangangokuthi amehlo akho agcwala izinyembezi. Kusetshenziswa ukuxhumana lapho umuntu ethola okuthile okujabulisa ngempela. Le Emoji yaziwa kakhulu kangangoba bekungeyokuqala ukwengezwa kusichazamazwi sesiNgisi i-Oxford kwathi ngo-2015 yathathwa “njengeZwi Lonyaka”.
Le Emoji ivame ukusetshenziselwa ukuveza ukukhululeka lapho uphuma esimweni esinzima. Kungasetshenziswa futhi ukusho ukuthi ubunamahloni ngesimo esithile.
Le Emoji isetshenziswa ngesikhathi lapho umuntu efuna ukuveza ubumsulwa bakhe. Libuye lisetshenziswe lapho othile enza izenzo ezinhle, emnandi kakhulu, engenacala, noma eziphatha ngendlela eyisibonelo.
Ungangithathi ngokweqiniso! Le Emoji isetshenziselwa ukukhombisa umlayezo oyindida, oyindida noma ojabulisayo. Ngaphezu kwalokhu, kungasho ukuthi unamahloni noma awuthandi ihlaya.
Lobu buso obunonya obucwayizayo bungabonakalisa isenzo sokusebenzisana noma imvume, futhi busetshenziswa njengophawu lokudlala ngothando. Ngokufanayo, ingasetshenziswa ukuveza "KULUNGILE" okunikezwa ngumuntu, ihlaya noma indida kuye ngecala.
Lobu buso bokukhululeka ngakho konke kwahamba kahle! Kusetshenziswa lapho umuntu ejabule ukuthi okuthile okungemnandi kuphelile. Kungasho futhi ukuthi lowo muntu ukhululekile, akanakho ukukhathazeka.
Lena enye ye-Emojis yokuqabula esetshenziswa kakhulu, ezwakalisa ukwazisa, ukubonga noma inhloso ethile yothando. Ingasetshenziswa futhi ekugcineni komusho obhuqayo noma njengokusabela esigijimini esingenanhlonipho.
Le Emoji ingasetshenziswa ngenye indlela yokuthi "Ngiyadlala", ukuze kuthambise amazwana ahlekisayo noma ukwenza kucace ukuthi okuthile kushiwo okungafanele kuthathwe njengeqiniso.
Izibuko ezinkulu, ukumomotheka okungajabulisi namazinyo angaphandle, le Emoji iyisimo esingokwengqondo somuntu ohlakaniphile. Isetshenziswa ngendlela ehlekisayo noma ebhuqayo, ukuveza ukuthi uhlakaniphe kangakanani.
Uma ufuna ukufundisa ubuhlakani, lena i-Emoji ekahle. Ingabuye isetshenziselwe ukukhombisa indida nokunganaki okuthile okukhulunyiwe. Ngaphezu kwalokho, lifanekisela ilanga, amaholide kanye nehlobo ogwini.
Lokho kumamatheka okuyingxenye kumelela ukubhuqa, ukubanda noma kusetshenziselwa ukusho ukuthi kukhona owenza okuthile. Ingase futhi isetshenziselwe ukudlala ngothando noma ukwenza amazwibela ocansi.
Isetshenziswa lapho othile ezizwa ekhathazekile, engavikelekile, futhi engakhululekile. Kubonisa ukuthi umuntu ukhathazekile ngesimo esinzima noma isenzakalo esibalulekile.
Le Emoji isetshenziswa uma uphatheke kabi, uthukuthele, noma uthukuthele okuthile. I-Emoji Yobuso Obuthukuthele iveza isimo esibi noma ukungakhululeki esimweni.
Isetshenziswa lapho umuntu ethukile, esesimweni esingakhululekile noma enze iphutha. Veza ukuphoxeka, ukuthi udlula kokuthile okubangela amahloni kakhulu, noma ukusabela ekuncomeni noma umlayezo othophayo.
Lobu buso obuthukile bukhuthazwe umdwebo othi The Scream weciko laseNorway u-Edvard Munch. Kusho ukuthi umuntu uyesaba, uvalo ngento ethile.
Lobu buso bumele umuntu owesabayo nodangele. Kubonakala kuthuswe ngokujulile futhi kumangazwa isigameko esibi noma okuhlangenwe nakho okukhulu.
Le Emoji isetshenziselwa ukumela ukuthi umuntu akakwazi ukukhuluma. Ukuthi othile akafuni noma akakwazi ukusho lutho ngesihloko esithile. Isetshenziswa ezingxoxweni ezinzima, eziphoxayo noma ezimbi.
Le Emoji ibonisa ubuso obungabonisi nokubukeka okumaphakathi. Kusho ukuthi umuntu akanandaba nesimo. Njengomthetho ovamile, lisetshenziswa lapho okuthile kungenasithakazelo futhi kungekho nkulumo efanelekile yokudlulisa lowo muzwa.
Le Emoji imelela ukuthi okuthile bekuyihlazo ngempela. Kuwukubonakaliswa kovalo noma ukuphoxeka. Ingasetshenziswa futhi njengokumomotheka okunecala kancane, okuvela kumuntu owenze into ewubuphukuphuku futhi ozama ukuxazulula isimo esishubile ngokwenza ubuso.
Hewu Nkosi yami! Lobu buso obumangele ngokungemukeleki busetshenziswa lapho kwenzeka okuthile okumangazayo. Kungaba ukusabela ekuziphatheni okubi noma umlayezo odelelayo, noma lapho kungekho okungenezelwa kulokho osekushiwo.
Le Emoji ibonisa umuntu oshone ngenxa yokukhathala. Leli bhamuza eliphuma ekhaleni liwuphawu oluvamile lwe-manga, olumelela ukuthi umlingisi ulele.
Isetshenziswa njengesisho sokuthi inkulumo ibhora kakhulu futhi iyozela.
Le Emoji isho ukuthi lo muntu ubenengekile ngalokho obekushiwo kangangokuthi ubengakwazi ukukubuyisela. Isetshenziswa njengendlela yokungavumeli okuthile.
Lokhu kumomotheka okunonya okunezimpondo zikadeveli ezincane kufuna ukukhombisa ukuthi lo muntu ufuna ukwenza inkinga. Ingasetshenziswa futhi ngonya noma ngokocansi.
Haleluya! Lezi zandla ezilulelwe phezulu zisetshenziselwa ukubungaza okuthile noma ukuveza ukuthi umuntu ujabule ngoba into ebilindelwe igcine yenzeka. Ukhombisa nokuthi ujabule futhi uyasithokozela lesi sikhathi.
Wenze kahle, kuhle kakhulu! Le Emoji ibonisa izandla ezimbili ezishaya izandla futhi isetshenziswa kakhulukazi ukuveza imvume nokubonga. Ingasetshenziswa futhi ngokubhuqa, uma kukhona okungakufanelanga ukushayelwa ihlombe!
Lesi sibhakela sisetshenziselwa ukukhuthaza umuntu noma ukusho ukuthi uvumelana nomuntu osohlangothini lwakhe. I-Fist Emoji ingenye edume kakhulu, esetshenziswa ngokunembile njengesenzo esidumile sobungani empilweni yangempela, okungukuthi ukubingelela umngane esikhundleni sokuthi "sawubona". Ngakolunye uhlangothi, kungabuye kuhunyushwe njengosongo lokushaywa.
Isetshenziswa uma uzwa noma ubona othile enza into ewubuphukuphuku, kodwa futhi ingasetshenziswa uma uzizwa "uhlazekile abanye."
I-Peach Emojis isetshenziswe kakhulu ukumelela izinqe, ngenxa yokufana okubonwa ngabasebenzisi abaningi. Lokhu kuholele ekutheni aziwe ngele-"butt emoticon".
I-Emoji Yenyanga Emnyama ivamise ukusetshenziselwa ukugqamisa incazelo yocansi emshweni. Ukudlala ngothando kusetshenziswa njalo noma ukwenza ihlaya locansi.
Le Emoji ye-Smiling Poop isetshenziswa kuzimo eziningi. Ukusetshenziswa okuvamile kwalokhu ukuthi okuqukethwe kubi, kodwa kungase futhi kusetshenziselwe ukuveza ulaka lokwenziwa, ngenxa yobuso obujabule nobumamathekayo bale nqwaba yendle.
Le Emoji ivame ukusetshenziswa ukufundisa othile njengokungathi uyathandaza, ecela okuthile kuNkulunkulu. Kodwa-ke, lokho ekumelelayo ngempela "isihlanu esiphezulu".
Ngingaya kanjani? Le Emoji ikhombisa owesifazane okufanele aqondise ikhasimende futhi aphendule imibuzo yabo. Nokho, ngokuvamile kuye kwaba uhlobo lokubhuqa noma isibindi.
i-emoji ethukuthele png
imuvi ephelele ye-emoji